Samva : nitokona ireo mpandraoka fako 600 | NewsMada
Samva : nitokona ireo mpandraoka fako 600
Naneho ny alahelony omaly ireo mpiasa mpandraoka fako miisa 600 ao amin’ny Samva. Nitokona nampiato ny asany izy ireo nitaky ny karama tsy mbola voarainy. Nangataka ny hampidirana azy ireo ho mpiasa raikitra ihany koa ireto mpandraoka fako ireto.
Nilaza izy ireo fa mafy ny asa, miaina ny maloton’Antananarivo rehetra kanefa anisan’ny olona faraidiny sy tsy mba misy mpijery. « Efa an-taona maro izahay nandraoka ny fakon’Antananarivo kanefa tsy mbola manana fahitalavitra na salon akory hatramin’izao ».
Nanao antso avo amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ihany koa ireto mpiasan’ny Samva ireto ny mba hitsinjovana azy ireo ara-pahasalamana. Miahy tena ny mpandraoka fako rehefa marary fa tsy manana fiantohana ara-pahasalamana, tsy mpikambana amin’ny Cnaps ihany koa.
Nilaza ny talen’ny Samva, Ratolojanahary fa efa vonona ny karama notakin’izy ireo ary efa neken’ny fitantanana. Efa miverina miasa ara-dalàna, araka izany, ireo mpiasa raha ny filazany hatrany. Tsikaritra ho nisavovona ny fako teto Antananarivo, hatramin’ny faran’ny herinandro teo vokatr’ity fitokonan’ny mpiasa ity